ပျောက်ဆုံးသွားသော ဆိုင်ကယ်တန်ဖိုးအတိုင်း လျော်ကြေးငွေ(၂၅)သိန်း ပေးအပ်ခြင်း - Young Insurance
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အာမခံရုံးများ တိုင်ကြားရန်
+95 94577 000 11
ပင်မစာမျက်နှာ » Posts » ပျောက်ဆုံးသွားသော ဆိုင်ကယ်တန်ဖိုးအတိုင်း လျော်ကြေးငွေ(၂၅)သိန်း ပေးအပ်ခြင်း
ပျောက်ဆုံးသွားသော ဆိုင်ကယ်တန်ဖိုးအတိုင်း လျော်ကြေးငွေ(၂၅)သိန်း ပေးအပ်ခြင်း
News, Posts နိုဝင်ဘာ 16, 2021 1:09 ညနေ
တိကျမြန်ဆန် ယမ်းအာမခံ ဆိုတဲ့ အတိုင်း. ယမ်း အာမခံရဲ့ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမှုကြောင့် အာမခံထားသူ တိုင်းစိတ်အေးချမ်းသာစွာ၊ လုံ ခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ပါပြီ…
ယမ်းအာမခံဟာ တိကျမြန်ဆန်မှုနဲ့အတူ အာမခံထားရှိသူများကို တစ်ဦးချင်းစီအထိ အမြဲဝန်ဆောင်မှုပေးနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်. ဒီတခါမှာလည်း ယမ်းအာမခံမှ ဆိုင်ကယ်အာမခံ ထားရှိသူ ဒေါ်ခိုင်ဇာလင်းအား ပျောက်ဆုံးသွားသော ဆိုင်ကယ်တန်ဖိုးအတိုင်း လျော်ကြေးငွေ(၂၅)သိန်းကျပ်တိတိကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်…
မိသားစုတိုင်းရဲ့ ဘဝတွေ ပူပင်သောကမဖြစ်စေရေး ၊ လုံခြုံရေးနဲ့ ရှင်သန်ရေးအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ စီးပွားရေး လိုအပ်ချက်တွေကို တဖက်တလမ်းက ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ အာမခံ စနစ်ကို အရယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီဆိုရင်တော့ မှန်ကန်တိကျပြီး မြန်ဆန်တဲ့ ယမ်းအာမခံ ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေ…
ပျောက်ဆုံးသွားသော ဆိုင်ကယ်တန်ဖိုးအတိုင်း လျော်ကြေးငွေ(၂၉)သိန်း ပေးအပ်ခြင်း
မေတ္တာဖြင့်ဖေးကူ ယမ်းအာမခံရဲ့ ဒါနအလှူ
သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးမှု အာမခံလျော်ကြေးငွေ ပေးအပ်ခြင်း
ယာဉ်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် အာမခံလျော်ကြေးငွေ ပေးအပ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ယမ်းအာမခံအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်တွင် dwonload လုပ်ပြီးရယူနိုင်ပါသည်။ မရှင်းလင်းသောအချက်များကို သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဟော့လိုင်းဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဖိုင်အား Download ပြုလုပ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အာမခံလုပ်ငန်းအား ကျယ်ပြန့်လာစေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာမခံအကြောင်းအား နားလည်သဘောပေါက်မှုတိုးတက်လာစေရန်အတွက် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လိပ်စာ : အမှတ် ၈၈၆/၈၈၈၊ ပြည်လမ်း၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။
အီးမေးလ် : info@younggeneralmm.com
ဖုန်းနံပါတ် : +959 457700011 / 44
အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန် : 09 44 888 3311 / 3300
ရုံးလိပ်စာကို Google Map တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
2020 Theme. All Rights Reserved by Young Insurance.